Ixesha kwiGoms / ixesha leholide
Schweiz, Kanton Wallis, Switzerland
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJenelten
Le ndlu ibonelela ngombono omangalisayo we-Aletsch entabeni panorama. Ujikelezwe yindalo kwaye ungonwabela emthunzini, elangeni okanye kwingca ephantsi komthi. Indawo ezolileyo iyamema. I-Mühlebach yiparadesi yokuhamba kwindawo okanye kwiilali ezikufutshane ezikufutshane nangaliphi na ixesha lonyaka. Kwaye ebusika, indawo ye-ski ye-Aletsch inokufikelelwa kwimizuzu eyi-10 ngebhasi yamahhala. Kukho indawo yokupaka simahla phambi kwendlu. I-WiFi nayo iyafumaneka
Yindlu ekumgangatho ophantsi enembono entle yommandla weentaba. Indawo yokupaka ingasendlini. Inika indawo yokuhlala epholileyo ukuya kuthi ga kwi-2 yabantu. I-sofa kwindawo yokuhlala ingasetyenziselwa njengebhedi. 140cmx200cm. (Iiduvethi nemiqamelo emitsha ukusukela ngo-2021). Ikhabhathi enkulu eneminyango emibini kwigumbi lokulala, igumbi elineengcango ezimbini elakhelwe ngaphakathi kwindlu yangasese. Ifenitshala yegumbi lokunxiba, ikhitshi elinetafile yokutsala, ifriji kunye nesikhenkcisi. I-WiFi kunye neTV ziyafumaneka. Isihlalo kunye nendawo yengca.
Ngenxa yoqwalaselo kwabo bane-allergies. Akukho zilwanyana zasekhaya zivumelekileyo.
Indawo yokuhlala eholideyini eMühlebach ibekwe kwindawo yokunyuka intaba yeBinntal landscape park, ipaki yendalo yengingqi ebalulekileyo kuzwelonke. Indawo yokutyela ezimnandi ezifana nosapho lakwaKummer, iHängebrigga (iNtshatsheli yeHlabathi yeOlimpiki kaPatrica Snowbord ka-2011) iyakumema ukuba uhambe umgama ongange-2-3 km. Ebusika kunye nezihlangu zekhephu kunye nasehlotyeni njengendlela yokuhamba intaba, indawo yokutyela yaseChäserstatt e-1777m iyimfuneko. Ukongeza, lo mmandla ubonakaliswe ziibhayisekile zeentaba kwaye, njengeparadesi ye-ski, iAletsch Arena yeyona nto ibalaseleyo. Ilali eselumelwaneni yase-Ernen yafumana ibhaso likaWakker loKhuseleko lweLizwe laseSwitzerland ngowe-1979. Ukusukela ngo-1974 umdlali wepiyano uGyörgy Sebök wabamba iiklasi zonyaka zomculo wepiyano kunye nomculo wegumbi e-Ernen, apho kwavela khona umnyhadala womculo wegumbi lasehlotyeni (uMnyhadala weKamva). Yiyo loo nto u-Ernen ekwabizwa ngokuba yi "Music Village Ernen". I-Aletsch Arena, iGoms kunye nemimandla yePaki ye-Binntal Landscape inikeza uluhlu olubanzi lweziganeko. Ukuhamba okukhokelwayo / ukuhamba kwe-glacier, ukhenketho lweelali, umboniso ovulekileyo we-TWINGY LAND ART okanye ukhenketho kwimigodi ye-mineral yaseLengenbach kwintlambo yaseBinn. Inento yakhe wonke umntu.
Umbuki zindwendwe ngu- Jenelten
Sinamagumbi akwisakhiwo esinye kumgangatho ongasentla, nto leyo eqinisekisa ubumfihlo. Indawo ingasetyenziswa yodwa. I-advantage kukuba ndisoloko ndifumaneka ngefowuni okanye xa ndikhona.
P.S. Kwakhona kubaqeshi bexesha elide.
P.S. Ibhedi kunye nelinen yokuhlamba ayifakwanga kwixabiso. Inokwenziwa ifumaneke ngesicelo somrhumo we-CHF 20.00 ngomntu ngamnye. Oku kunokuhlawulwa kwisiza. Ukuba ufuna ukuza nempahla yakho! Ibhedi 140x200cm / duvet 160x200cm / umqamelo 65x100.
Enkosi ngomyalezo omfutshane.
Sinamagumbi akwisakhiwo esinye kumgangatho ongasentla, nto leyo eqinisekisa ubumfihlo. Indawo ingasetyenziswa yodwa. I-advantage kukuba ndisoloko ndifumaneka ngefowuni okanye xa nd…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Schweiz